Wararka Maanta: Talaado, Sept 15, 2020-Maxkamada la dagaalanka Musuqa Kenya oo guddoomiyaha Gaarisa ku riday xukun isaga iyo afar xubnood oo xafiiskiisa katirsan
Waa markii ugu horeysay oo gudoomiyaha dacwad lagu soo ooga isaga iyo afar xubnood oo ka tirsan maamulkiisa, kuwaas oo loo haysto ku lug lahaanshaha lunsashada lacag dhan 233 milyan oo shilinka Kenya ah oo loogu talo galay Barnaamijka Taageerada Magaalooyinka.
Waxaa lagu eedeeyay sideed dambi oo ay ka mid yihiin, inay si ula kac ah ugu hogaansami waayeen sharciyada la xiriirta maareynta lacagaha iyo ku takrifalka hantida dadweynaha.
Dhammaantood waxay beeniyeen eedeymaha loo haysto ee ka soo yeeray madaxa garsoorka ee maxkamadda la dagaallanka musuqmaasuqa dalka Kenya.
Masuuliyiinta la xiran gudoomiyaha Gaarisa ayaa Midkiiba waxaa lagusii deyn doonaa damiin lacageed oo dhan Sh1.2 milyan.
Qaadiga maxkamada Ogoti ayaa u diiday inay dib ugu laabtaan xafiisyadooda waxaana lagu amray inay baasabooradooda ku xareeyaan maxkamada.
Cali Bunow ayaa noqonaya gudoomiyihii lixaad ee laga hor istaago inuu dib ugu laabto xafiiska sababo la xiriira musuq maasuq.
Maxkamada ayaa Kiiskaan go’aan kasoo saaridoonta illaa bisha Oktoobar 23,keeda.